MACRON IYO SHIRKADAHA FARANSIISKA OO QOORTA ISKULA JIRA | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta MACRON IYO SHIRKADAHA FARANSIISKA OO QOORTA ISKULA JIRA
MACRON IYO SHIRKADAHA FARANSIISKA OO QOORTA ISKULA JIRA
HADABA FARANSIIS MUXUU SOO SAARAA
Dalka Faransiiska wuxuu ka mid yahay dalalka warshadaha ku hor maray, wuxuuna soo saaraa ama leeyahay shirkado aad u fara badan oo qaarkood waxa ay far sameeyaan adduunka aad looga yaqaanno, waxay soo saaraan waxyaabo isugu jira cuntooyin, cabitaan, dhar iyo kabo, Barafuunno, waxyaabaha la isku qurxiyo, Elektoroonigga, qalabka guryaha, dhismaha, baabuurta, diyaaradaha iyo dawooyinka.
Shirkadaha ugu caansan ee markii wax soo saarkooda la arko lagu xasuusanayo Faransiiska waxaa ka mid ah; shirkadda weyn ee Mikiyaajka iyo wax walba oo la isku qurxiyo ee L’Oréal Paris (Looriyaal Baariis) taas oo sanadkii tegay faa’iidday ku dhowaad 30 Milyan oo dollar.
Shirkadda alaabaha qaaliga ah sameysa ee Cristian Dior (Kirishtiyaan Daayoor) ee la aas aasay 1946-kii, Shirkadda Chanel (Jaanel) ee soo saarta dharka qaaliga ah iyo waxyaabaha la halmaala Fashion-ka, taas oo iyana la aas aasay 1913-kii.
Shirkadda Shidaalka iyo Gaska ee Total ayaa ka mid ah shirkadaha ugu caansan Faransiiska, taasoo ka mid ah 7 shirkadood ee Shidaalka ee ugu waaweyn caalamka, waxayna shaqeyneysaa tan iyo 1924-kii.
6-da baabuur ee Faransiisku ku faano ayaa iyagana waxay kala yihiin; shirkadda baabuurta militeriga sameysa ee Auverland (Awferlaand), shirkadda Renault (Renoolt), Peugot (Biijoot), Renault (Renoolt), Albine (Albiin), Citroen (Sitroon).
Waxaa kale oo Faransiisku ku caan yahay shirkadda qalimmada sameysa ee BIC ee la aas aasay 1945-kii, taasoo sanadkii 2016 faa’iidday 250 milyan oo Euro.
Shirkadaha biyaha la cabo sameeya ee Volvic iyo Evian (Foolfig iyo Ifiyaan), Yoghurrada kala duwan Activia (Aktifiya), Danone (Danoone) iyo Actimel (Aktimeel), Farmaajooyinka 1600 nuuc ah oo ay ugu caansan tahay Camembert iyo Cantal (Kamembert iyo Kantaal), Lavache qui Rit (Lafaash kii Ri) lo’dii qosleysay ee la aas aasay 1921-kii iyo sidoo kale farmaajada Jubnatu Abuu Walad.
Faracyada Dukaanka caanka ah ee qalabka dhismaha ee Leroy Merlin (Lerooy Marlaan) ee la aas aasay 1923-kii.
Dukaannada cuntada ee uu Faransiisku caan ku yahay ee meelo badan oo adduunka ah ka furanna waxaa ka mid ah Carefour (Kaarfuur) ee la aas aasay 1958-kii, waxaa dukaankan uu xarumo ku leeyahay 12,225 xarumood oo gudaha iyo dibadda ah, waxaana u shaqeeya shaqaale ka badan 300,000, dukaannada kale ama supermarketyada waa weyn ee Faransiiska waxaa ka mid ah Leclerc (Lokleekh) ee la aas aasay 1948-kii kaasoo isna xarumo ku leh 94,000 oo goobood.
Supermarket-ka weyn ee isna shaqaalihiisu gaarayaan 350,000 ee lagu magacaabo Auchan ayaa isna ka mid ah dukaannada faransiiska ugu caansan ee meelo kale oo dunida ahna ku yaalla.
Airfrance iyo Airbus ayaa ka mid ah shirkadaha diyaaradaha aan sharraxaadda u baahneyn ee uu Faransiisku leeyahay, Airbus waxay dunida ka iibisaa diyaaradaha casriga ah, waxaana ka shaqeeya in ka badan 133,000 oo shaqaale.
Dhanka labiska iyo Moodada waxaa Faransiisku ay leeyihiin shirkadaha kala ah Chanel, Louis Vuitton (Luwiis Futoon), Givenchy (Gifenji), Lacoste (Lakooste), Balmain (Balmaan), Louboutin (Lubotaan), Pierre Cardin (Biyeer Kardaan), Yves Saint Laurent (Iif Saan Lokhaan), Dior (Daayor), Jean Paul Gaultier (Jaan Bool Guultiyee) Chloé (Kolowee), iyo qaar kale, waxaana shirkadahan ay xarumo ku leeyihiin magaallooyinka waaweyn ee caalamka oo ay alaabahooda u iib geeyaan.
Silsiladda Hoteellada Ibis (Ibis) ee 1,218-ka xarumood leh, isla markaana la aas aasay 1974-kii ayaa ka mid ah goobaha dhaqaalaha ka soo gala waddanka Faransiiska.
Dabcan shirkadaha isgaarsiinta Faransiiska sida France Telecom, Orange, SFR iyo Bouygues Telecom (Buuyge Telekom) ayaa xarumo ku leh gudaha Faransiiska iyagoo sidoo kalena faracyo ku leh qaar qaaradaha adduunka.
Weli waxaa socda qaadacaadda dalalka Islaamka iyo kuwa carbeed ay ku joojiyeen badeecadaha Faransiiska uu soo sanceeyo kaddib markii dhowr jeer wargeyska Charlie Hebdo –Shaarli Hebdoo uu sawir gacmeed ku aflagaadeeyay Nebi Muxamad (NNKH), iyadoo kaddibna rabshado arrimahaa la xiriira ay ka dheceen faransiiska oo dad lagu dilay, dowladda Faransana ay si weyn dilalkaa ugu eedeysay waxay ku sheegtay Islaamka fashiistaha ah ama Islaamka argagixisada ah.
Tan ayaa cashir u noqonaysa Faransiiska oo aan filanaynin in dharbaaxo intaa la eg ay ku dhici kartay, waxaana laga sugayaa in lahjadda qallafsan iyo islaam naceybka uu xoogaa wax ka beddelo, si wada noolaanshaha iyo ganacsiga xorta ah uu u sii socdo, sidaa darteed madaxweynaha Faransiiska Macron iyo Shirkadaas kor ku soo xusney ayaa la sheegey in qoorta iskula jiraan ka dib markii dalalka islaamka ay qaadaceen.
Maqaal horeDonald Trump iyo Joe Biden oo socdaal ku maraya guud dalka Mareykanka
Maqaal XigaSawiiro :Xulka Kubada Cagta KGS oo maanta la gudoonsiiyay agab Sports.
IN KA BADAN 170 QOF OO KU DHAAWACMAY WEERAR ISRAA’IIL KU QAADAY MASJIDKA AL-AQSAA
SOOMAALIYA OO BEENISAY IN AY KA LAABATAY DACWADDII BADDA EE KALA DHEXAYSAY KENYA
IN KA BADAN 170 QOF OO KU DHAAWACMAY WEERAR ISRAA’IIL KU...
SOOMAALIYA OO BEENISAY IN AY KA LAABATAY DACWADDII BADDA EE KALA...